सबैको आ–आफ्नै स्टाइल हुनुपर्छ - अन्तर्वार्ता - नारी
सबैको आ–आफ्नै स्टाइल हुनुपर्छ
एक दशकदेखि पाइलटका रूपमा कार्यरत मोनिका हाल यति एयरलाइन्समा क्याप्टेन छिन् । उनलाई असोज र कात्तिक महिना सारै मन पर्छ । त्यतिबेला माउन्टेन फ्लाइट उडाउँदा आकाश, हिमाल, पहाड एवं मौसम निकै सुन्दर देखिन्छन् ।
जाडो महिना कस्तो लाग्छ ?
जाडो महिना मलाई खासै मन पर्दैन । चिसोको एलर्जी भइरहन्छ । त्यसैले जाडोबाट बच्ने उपाय गरिहाल्छु ।
जाडोमा फ्लाइट उडाउँदा तपाईंको पहिरन कस्तो हुन्छ ?
युनिफर्ममाथि लेदरको ज्याकेट, लेदर बुट, हातमा लेदरको पञ्जा हुन्छ र प्लेन भित्र त एसी भइहाल्छ । जाडो महसुस हुन पाउँदैन ।
जाडो मौसममा बढी के लगाउनुहुन्छ ?
स्कर्ट मलाई मनपर्ने आउटफिट हो । जाडो मौसममा पनि स्कर्ट नै बढी लगाउँछु । ऊलन, पस्मिना स्कर्टमा स्टकिङ, बुथ र लङ कोट बढी लगाउँछु ।
कस्तो पहिरनमा स्मार्ट फिल हुन्छ ?
फर्मल वेयरमा स्मार्ट लाग्छ ।
सपिङ कता गर्नुहुन्छ ?
म नेपालमा त्यति सपिङ गर्दिन । जेट स्ट्रिमको सिमिलेटर लन्डनमा हुने हुदाँ हरेक वर्ष लन्डन जानुपर्छ । त्यही मौकाको फाइदा उठाई उतै सपिङ गर्छु । ब्रान्डेड शोरुमका सेलहरूमा बढी किनिरहन्छु । सस्तो र राम्रो चीज पाइने भएकाले वर्ष दिनलाई चाहिने सबै सामान उतैबाट किनेर ल्याउँछु ।
सबैभन्दा बढी कलेक्सन केको छ ?
जुत्ता र कोटको ।
जाडोमा खाना के मनपर्छ ?
ग्रिन टी, सुप, झोल म:म, क्वाँटी, थुक्पा नै बढी मनपर्छ ।
फिट रहन के गर्नुहुन्छ ?
नियमित रूपमा जिम जान्छु । कार्डियोविना कल्पनै गर्न सक्दिन । हरेक मौसम जिम जान्छु ।
फेसनप्रतिको तपाईंको बुझाइ ?
सबैलाई सबै खालका आउटफिट सुहाउँदैनन् । सबैको आ–आफ्नै स्टाइल हुनुपर्छ । अरुको कपी गरेर, फेसनमा यो छ भनेर पछी लाग्नु हुँदैन । आफूले जे लगाइएको छ त्यसमा सेल्फ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ । कन्फिडेन्ट भयो भने जस्तो लुक्समा पनि स्मार्ट देखिन्छ ।
चैत्र १८, २०७५ - कर्पोरेट लुक